Abavelisi bephepha laseChina pmma kunye nabathengisi | Gokai
Iimpahla 1.Consumer: Ware zangasese, ifenitshala, zokubhala, yezandla, ibhodi yomnyazi, ukubonisa kwithala, njl
Izinto zokuthengisa ezi-2: iimpawu zempawu zentengiso, imiqondiso, iibhokisi ezikhanyayo, imiqondiso, imiqondiso, njl
Izinto zokwakha ezi-3: umthunzi welanga, ibhodi yokugquma isandi (isandi seplate yesandi), umnquba, i-aquarium, i-aquarium, i-sheeting sheeting yangaphakathi, ihotele kunye nokuhonjiswa kwendawo yokuhlala, ukukhanya, njl.
Ubunzima obuthile 1.19-1.20
Ukuntywila kwamanzi (24h) 0.30%
Ulungelelwaniso lokuQhekeka 700kg / cm2
Ulungelelwaniso lokuqina 28000kg / cm2
Ulungelelwaniso lokuQhekeka 1.5kg / cm2
Ukuhambisa (imitha efanayo) 92%
Imitha epheleleyo 93%
Ubushushu Ukwahlula Ubushushu 100oc
Ubushushu be-Ultimae bokusebenza ngokuqhubekayo 80oc
Uluhlu lweThermoforming 140-180oc
Amandla okuvala I-20V / mm
Ukucaca okuphezulu Iphepha le-PMMA lelona liphezulu leplastikhi ebonakalayo ebonakalayo, ukuhanjiswa ngama-93%.
Iqondo eliphezulu loomatshini Iphepha le-acrylic cast linamandla aphezulu kunye nefuthe lokumelana namaxesha angama-7-18 aphezulu kuneglasi yesiqhelo.
Ukukhanya kubunzima Ukuxinana kwephepha le-PMMA yi-1.19-1.20 g / cm³, kunye nobukhulu obufanayo bezinto eziphathekayo, ubunzima bayo sisiqingatha seglasi eqhelekileyo.
Ukusebenza ngokulula Ukuqhubekeka kakuhle: kufanelekile kwinkqubo yomatshini kunye nokwenza i-termail.
Unokumelana okuhle nokubola kwemichiza kwaye kufanelekile ukuhonjiswa komphezulu njengokutshiza, isilkscreen yoshicilelo lokucoca ulwelo lomphunga.
Isicelo se-5.Industrial: iimveliso ze-Thermoformed, iprojekthi yokugcina ifriji, ukhuseleko lobunjineli;
6.Advertisement: Silk screen yoshicilelo, izinto ngentlabo, ibhodi mboniso, denoters;
1. ibhokisi elula 2. ibhodi yezimpawu yangaphandle 3. Ibhodi yemiqondiso 4. Iindidi zeNdawo yokuBonisa
5.Isakhelo sefoto 6.izinto zentengiso 7. izinto zokuhombisa 8. ifanitshala
9. udonga lwengxolo 10. isibhakabhaka 11. uloliwe kunye nemoto windows 12. imveliso yezandla
13. Ukupakisha ukutya 14. acrylic akwariyam 15. imveliso yemihla ngemihla 16. imveliso yokuhlambela njalo njalo
Egqithileyo iphepha leplexiglass
Iphepha le-acrylic 2mm